Hitachi ကင်မရာများကို Iowa ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာပူးပေါင်း Technology Services ကယူနစ်များအတွက်လွယ်ကူခြင်းအရည်အသွေး, ယုံကြည်စိတ်ချရသောနဲ့ Setup Boost - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Hitachi ကင်မရာများကို Iowa ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာပူးပေါင်း Technology Services ကယူနစ်များအတွက်လွယ်ကူခြင်းအရည်အသွေး, ယုံကြည်စိတ်ချရသောနဲ့ Setup Boost
ဓာတ်ပုံ Credit: ရှင်ပေါလု Jewel
Hitachi ကင်မရာများကို Iowa ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာပူးပေါင်း Technology Services ကယူနစ်များအတွက်လွယ်ကူခြင်းအရည်အသွေး, ယုံကြည်စိတ်ချရသောနဲ့ Setup Boost
Z-HD5500s အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်န်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကိုကူညီပေးနေစဉ်စိတ်ချလက်ချတိုးက high-profile ကိုဗီဒီယိုကထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းများကိုအပေါ်ယူသာလွန်ရလဒ်များကိုပေး
Woodbury, နယူးယော့ဇန်နဝါရီလ 11, 2019 - Iowa ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာအဆိုပါပူးပေါင်းနည်းပညာန်ဆောင်မှုများ (CTS) ယူနစ်အတွက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ 1900 ဧကဖြတ်ပြီးဌာနများ, ကောလိပ်များ, သုတေသနစင်တာများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးယူနစ်များအတွက် On-တည်နေရာကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု, အသံဖမ်း, conferencing နှင့် streaming များန်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းသည် ကျောင်းဝင်း။ အုပ်စုတစုရဲ့စီမံကိန်းများကိုမူရင်းကိရိယာများ၏စွမ်းရည်များ outgrow မှစတင်ခဲ့သည့်အခါကနေ Z-HD5500 စတူဒီယိုနှင့်ကွင်းဆင်းထုတ်လုပ်မှုကင်မရာများဝယ်ယူ Hitachi Kokusai လျှပ်စစ်အမရေိ, Ltd (Hitachi Kokusai) setup ကို, တသမတ်တည်းစွမ်းဆောင်မှုနှင့်သူတို့လိုအပ်အမြင်အာရုံအရည်အသွေးကို၏လွယ်ကူခြင်းအောင်မြင်ရန်။
Iowa ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ, ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်ထူးချွန်များအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူသိများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအကြမ်းဖျင်း 36,000 ဘွဲ့ရနှင့်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကို၏အောင်မြင်မှုကိုထံအပ်နှံသည်။ အဆိုပါကြေး-for-service ကို CTS ယူနစ်ကလူချိတ်ဆက်နည်းပညာများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှတစ်ဆင့်၎င်း၏ဖောက်သည် '' အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်လိုအပ်ချက်များကိုထောက်ပံ့တဲ့မစ်ရှင်နှင့်အတူခြောက်လလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုတစ်စု၏မူလမူလတန်းရည်မှန်းချက်အွန်လိုင်းအတန်းကယ်နှုတ်ခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါတို့သည်အချို့သောနိမ့်ဆုံးနည်းပညာကိုစတင်ကျနော်တို့မရရှိနိုင်ခဲ့သောအရာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်," ရော်ဂျာ Suski, Iowa ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာပူးပေါင်း Technology Services ကမန်နေဂျာကရှင်းပြသည်။ "ဒါကမကြာခဏကျနော်တို့တတျနိုငျသအကောင်းဆုံးအဖြစ်လူထုကိုထုတ်ကုန်အတူတကွ cobbling ဆိုလိုသညျ။ ကျွန်တော်တစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့အကြောင်းကိရိယာများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိမကယ်မလွှတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာကံကောင်းခဲ့သဘောပေါက်လာတယ်။ ကျနော်တို့အပေါ်ကို ယူ. ဖြစ်ရပ်များများ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုရောနှောသောဓမ္မ, သမ္မတအိမ်တော်လိပ်စာ, အထူးဖြစ်ရပ်များနှင့်ပိုပြီးထည့်သွင်းရန်ကြီးပြင်းသောကြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ task ကိုမှတက်မဟုတ်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့အဓိကထုတ်လုပ်မှုကျရှုံးရှိခြင်းအန္တာရာယ်မပေးနိုင်ဘူး။ "
အဆိုပါကင်မရာများ '' နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များခဲ့ကြသည်အဖြစ် CTS အဖွဲ့သည်တစ်ဦးချင်းစီစီမံကိနျးအတှကျနေရာများအကြားကသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများရွေ့လျားနှင့်အတူ, setup ၏လွယ်ကူခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရအဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ "ငါသည်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်ဍာတစ်ဦးစံလမ်းအတွက်ကို set up နိုင်ဦးတည်းထုတ်လုပ်သူကနေ turnkey ကင်မရာစနစ်ကငျြတယျ," Suski ကဆိုသည်။ "တစ်ဦးက 1080p image sensor ကိုထားရှိခြင်းသည်ငါ့ကိုလည်းရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အချို့ကကင်မရာများသူတို့ 720p output ကိုတက်သည်-ကူးပြောင်းသာ 1080p အာရုံခံကိရိယာရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြားသူများကကိုယ့်ဖို့လိုင်စင်ရနိုင် 4K အာရုံခံကိရိယာ 1080p လုပ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ပြီးတော့သင်တက္ကသိုလ်ဘတ်ဂျက်၏သမ္မာသတိရှိသောအသုံးပြုမှုမဟုတ်သောအရာ, သုံးစွဲဖို့မသွားနေတစ်ခုခုပိုမိုပေးဆောင်ပါတယ်။ Hitachi Kokusai ကနေ Z-HD5500 ကင်မရာများကျနော်တို့ရှာနေခဲ့ဇာတိ 1080p ထောက်ခံမှုခဲ့နှင့်ငါတို့လိုအပ်ချက်များအတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်စျေးနှုန်းခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်ငါလေလံလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သူတို့ကိုအပါအဝင်အကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမသံသယရှိခဲ့ပါတယ်။ "
အဆိုပါ Z-HD5500 ရဲ့ခြွင်းချက် sensitivity ကိုလည်းမကြာခဏ CTS အဖွဲ့ကရင်ဆိုင်ရတဲ့အလင်းရောင်စိန်ခေါ်မှုများများအတွက်စံပြသက်သေပြခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့သို့သွားနေရာများတွင်တွေအများကြီးထဲမှာ, အလင်းရောင်ကလူကိုစဉ်းစားသည်လွန်ခဲ့သောအရာရှိနိုင်ပါသည်, ငါတို့လိုအပ်ချက်များကိုသည် dynamically ပြောင်းလဲနိုင်သည်" Suski ကဆိုသည်။ "ဥပမာအားဖြင့်တဦးတည်းစီမံကိန်းတွင်ကျနော်တို့ကတင်ဆက်သူတစ်ဦးကောင်းစွာ-lit စင်မြင့်မှာဆက်နေရန်မျှော်လင့်ထားပေမယ့်သူကကျွန်တော့်ကိုအခြေခံအိမ်သူအိမ်သားအလင်းရောင်ရှိခဲ့ရှိရာပရိသတ်ကိုသို့ထွက်သွားလေ၏။ အဆိုပါ Hitachi ကင်မရာများနေဆဲကောင်းတစ်ဦးရုပ်ပုံလွှာထုတ်လုပ်နေချိန်မှာပဲအသေးစားအမြတ်ညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူတင်ဆက်သူကိုလိုက်နာဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enabled ။ ဘာသာရပ်များ lit ထံမှမှောင်မိုက်နှင့်နောက်ကျောကိုသွားလျှင်ပင်ကျနော်တို့ကင်မရာကကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ကိုငါသိ၏။ "
setup ကိုနှင့်ဖိုင်ဘာဆက်သွယ်မှု၏အသစ်ကင်မရာများ '' ငြိမ်ဝပ်ကိုလည်းလျှော့ချ setup ကိုအချိန် enabled နှင့် Suski ရှာသောသွက်လက်တိုးပွားလာပါပြီ။ "ကျနော်တို့က Configuration နဲ့ setup ကိုပြဿနာများ၏မျှော်လင့်အတွက်အချိန်ပမာဏပိတ်ဆို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖို့အသုံးပြုပေမယ့်ယခုငါကျနော်တို့ဟာအလွန်တိုတောင်းသောအချိန်မှာ set up စစ်ဆင်ရေး၏အခြေစိုက်စခန်းအဆင့်အထိရှိသည်လိမ့်မယ်ယုံကြည်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ "တဦးတည်းဖိုင်ဘာကေဘယ်လ်ပေါ်မှာရှိသမျှပါဝါ, အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးနှင့်တာလီချိုးထားကင်မရာကနေတဆင့်အားလုံး interface နိုင်ဖြစ်ခြင်းငါ့ကိုလျင်မြန်စွာ setup ကိုအပြောင်းအလဲများကိုတုံ့ပြန်ခွင့်စဉ်ကအလွန်အဆင်ပြေသည်နှင့်အချိန်ကယ်တင်တော်မူ၏။ ငါနောက်ကျောကင်မရာရန်နောက်ထပ် signal ကိုပေးပို့ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဥပမာ, ငါသည်အခြား cable ကို run ရန်မလိုပါ, ကိုယ့်ခြေရင်းဘူတာရုံသို့ plug ကြောင့်အမျှင်ဓာတ်ကိုကျော်ထွက်တတ်၏။ "
CTS '' ယခင်ကင်မရာများဖို့ Z-HD5500s ၏အမြင်အာရုံအရည်အသွေးနှင့်ပုံရိပ်ကိုထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်နှိုငျးယှဉျ Suski နောက်တဖန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိုးတက်မှုတွေ့။ "ကျွန်တော်တို့အရင်ကရှိခဲ့အဆိုပါယူနစ်အခြေခံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူလျောက်ပတ်သောစက်မှုဇုန်ကင်မရာများခဲ့ကြပါတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ "သစ်ကို Hitachi ကင်မရာများနှင့်အတူ, wow, image ကိုတကယ် '' ပေါ်လာမှာပါ။ '' အရောင်တစ်အုပ်ဖြစ်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ပြီး, ငါပုံကိုကြည့်စေနိုင်သည်ဘယ်လောက်အများကြီးပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ ပြတ်သားခြင်းနှင့်အရောင်ပေါများကြွယ်ဝအတွက်ခြားနားချက်တစ်ရက်အဖြစ်လွင်ပြင်ဖြစ်၏။ "
နောက်ဆုံးတွင် Z-HD5500s တက္ကသိုလ်၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုမြှသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖို့ CTS ယူနစ် enabled ပါပြီ။ "ဒီ Hitachi ကင်မရာများအကြီးဖြစ်ရပြီ, ငါတို့တံခါးဝ၌လာကွောငျးဆိုစီမံကိန်းကိုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enabled ကြပါပြီ," Suski ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ "ငါသည်နည်းပညာဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမပါဘဲလုပ်ကိုင်ဖို့သွားသိသောကြောင့်ငါသည်တောင်းဆိုမှုကို '' ဟုတ်ကဲ့ '' ဟုပြောနိုင်ပါသည်။ "
Hitachi Kokusai လျှပ်စစ် Inc ကအကြောင်း
တိုကျို, ဂျပန်, ဌာနချုပ် Hitachi Kokusai လျှပ်စစ် Inc ကို, အသံလွှင့်စနစ်များ, လုံခြုံရေးနှင့်စောင့်ကြည့်စနစ်များ, ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် 2017 (မတ်လ 31, 2018 အဆုံးသတ်) အရောင်း 171,791 သန်းယန်းစုစုပေါင်းမှာ။ Hitachi Kokusai လျှပ်စစ် Inc ကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကမှာကုမ္ပဏီ၏ဝဘ်ဆိုဒ်သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.hitachi-kokusai.co.jp/global/en/index.html.
SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-01-11
နောက်တစ်ခု: က CP ဆက်သွယ်ရေး Simplylive နှင့်အတူနယူးနည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖွံ့ဖြိုး